Akụkọ - Ngwa na njirimara nzacha duplex
A na -akpọkwa ihe nzacha duplex. Emere ya ihe nzacha igwe anaghị agba nchara abụọ. Ọ nwere ọtụtụ uru, dị ka akwụkwọ akụkọ na usoro nwere ezi uche, ịrụ ọrụ akara dị mma, ike mgbasa ike, ọrụ dị mfe, wdg ọ bụ ngwa nzacha nwere ọtụtụ ihe nwere ngwa dị iche iche yana mmegharị siri ike. Karịsịa, ohere nzacha n'akụkụ akpa nwere ike pere mpe, nke nwere ike hụ na nzacha nzacha ziri ezi, yana nwee ike dochie akpa nzacha ngwa ngwa, na nzacha enweghị isi ihe ọ bụla, nke mere na a ga -ebelata ọnụ ahịa ọrụ. A na -eji nchara igwe anaghị agba nchara, nke nwere agba abụọ cylindrical. Ọ bụ otu igwe anaghị agba nchara welded structure. A na -egbucha ihe dị n'ime na mpụta, a na -ejikwa valvụ na -eme ka elu ya dị elu, ka enwere ike iji ya wepụ gas n'oge ọrụ. Njikọ ọkpọkọ na -anabata njikọ mejupụtara. Mgbe ule hydraulic 0.3MPa gasịrị, mgbanwe ọkpa ọkpa nke mpụga na -agbanwe agbanwe. The akụrụngwa nwere kọmpat Ọdịdị, adaba ime na mfe mmezi.
A na -ejikarị ihe nzacha ihu abụọ na nhazi ọgwụ ọdịnala China, ọgwụ ọdịda anyanwụ, ihe ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi, ihe ọ sugarụ sugarụ shuga, mmiri ara ehi, ihe ọ beụ andụ na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ.
A na -enyocha ụdị adịghị ike abụọ ma ọ bụ nke nwere colloidal, a na -ejikwa ihe nzacha abụọ ahụ n'otu oge, nke enwere ike ihicha na -akwụsịghị igwe.
A na -eji netwọk eme ihe mgbe niile.
Igwe a nwere mmeghe ngwa ngwa, mmechi ngwa ngwa, nbibi ngwa ngwa, nhicha ngwa ngwa, nzacha ngwa ngwa nke ọtụtụ, obere ala na mmetụta dị mma.
Igwe a nwere ike iji filtration mgbali mgbapụta ma ọ bụ nzacha mmịpụta agụụ.
Oghere nzacha nke igwe a bụ ụdị kwụ ọtọ, na -enwechaghị ọdịda na mgbawa nke akwa nzacha na obere mmiri mmiri fọdụrụ. Tụnyere ndị na -ebipụta nzacha kwụ ọtọ, arụmọrụ na -abawanye site na 50%.
3. Ihe eji eme ihe
Ngwa akụrụngwa niile bụ igwe anaghị agba nchara.
Nhọrọ ihuenyo: (1) ihuenyo igwe anaghị agba nchara (2) akwa nzacha (3) akwụkwọ nzacha site na igwe iji kewapụ nkwusioru, ị nwere ike nweta mmiri doro anya achọrọ ma ọ bụ ihe siri ike. Ọ na -ekwekọ n'iwu ọgwụ na ịdị ọcha nri ma na -emezu ụkpụrụ GMP.